Obama oo jeediyey khudbad uu kaga hadlay amniga - BBC Somali
Obama oo jeediyey khudbad uu kaga hadlay amniga
Image caption Obama wuxuu khudbadda ka jeediyey xarun ay ciidanka cirka ku leeyihiin Tampa, Florida.
Madaxweyne Obama ayaa dadka Ameerikaanka ah weydiistay inaysan lumin aragtida xagga qiyamka ee dalku ku dhisan yahay, marka laga hadlayo la dagaallanka argagixisada.
Khudbadiisii ugu dambaysay khudbadihiisa waaweyn ee uu kaga hadlayey dhanka amniga ayuu Mr Obama ku celiyey sida uu uga soo hor jeedo adeegsiga jirdilka oo ay ku jirto waxa loo yaqaanno 'waterboarding' oo ah in qofka jawaan madaxa loo galiyo, ka dibna biyo dusha looga shubo wajigiisa daboolan, taasoo hafasho oo kale ah.
Isagoo ka hadlayey xarunta ciidanka cirka ee MacDill oo ku taalla Tampa, Florida, ayuu Mr Obama wuxuu intaa ku daray in dagaalka ka dhanka ah argagixisada aan guul laga gaari karin ayadoo gidaar la dhex dhigayo Ameerika iyo dunida inteeda kale.
Wuxuu cambaareeyey xabsiga Guantanamo Bay oo uu sheegay inuu bar madow ku yahay sharafta dalka. Madaxweynaha la doortay, Donald Trump, ayaa hore u difaacayey adeegsiga biyaha qofka lagu hafiyo, wuxuuna sheegay in Guantanamo ay sii furnaan doonto.